နွေဆူးလင်္ကာ: August 2009
လောက က မှောင်ရတဲ့ အထဲ ...
ငါတို့ကို ချောက်ထဲတွန်းချနေတာ ...
ကျလို့ကို မဆုံးတော့ဘူး ....။ ။
(ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီးရင် အစဆုံး စာလုံးလေးတွေချည်း
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:16 PM
Labels: ကဗျာ comments (10)
လာဖြေကြတဲ့သူတွေကိုရော မဖြေတောင် ဖတ်ပေးသွားတဲ့ သူတွေကိုပါ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ မေးခွန်းလေးတွေက သိပ်မခက်ပေမယ့် ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာက ဘာမေးချင်တာလဲ နားမလည်မှာကိုပါ။ ခုတော့ မေးခွန်းကို နားလည်တဲ့ အပြင် မမေသူက တစ်ခုမှန်ပြီး ကိုကိုမောင် ပညာရှိကြီးက နှစ်ခုတောင် မှန်အောင် ဖြေလိုက်လို့ ငါ မေးခွန်းထုတ်တတ်ပြီကွ ဆိုပြီး ၀မ်းသာရပါတယ်။ ( စာမေးပွဲရာသီကျရင် စပေါ့ရိုက်ပြီး လုပ်စားရမယ် ... ငှဲ .. ငှဲ ...)
နံပါတ်(၁) အဖြေကတော့ ...
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးအနားမှာ ရှိတဲ့ မြစ်ကြီးနားမြို့နဲ့ တောင်ကြီးပေါ်မှာ ရှိတဲ့ တောင်ကြီးမြို့ပါ။
မမေသူက မြစ်ကြီးနားမှန်ပြီး ကိုကိုမောင်က နှစ်ခုလုံးမှန်ပါတယ်။ မမေသူဖြေတဲ့ အင်းလေးက မြို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်းနာမည်ပါ။ အဲဒီမှာ ရှိတဲ့ မြို့နာမည်ကလည်း ရွှေညောင်ပါ။ (ရွှေညောင်လား ညောင်ရွှေလား မကွဲပါ။ သိသူဖြေပေးခဲ့ပါ။) နောက် ကိုကိုမောင်ပြောတဲ့ ရေနံချောင်းကိုလည်း စဉ်းစားမိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ရေနံတွေက မြေကြီးအောက်မှာ ရှိနေလို့ မျက်စိနဲ့ အလွယ်တကူ မမြင်ရတဲ့အတွက် ချန်ထားခဲ့တာပါ။
နံပါတ်(၂)အဖြေကလည်း ကိုကိုမောင် မှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ‘က’ငယ်လို့ စဉ်းစားပြီး သူက ‘က’လေးလို့ ဖြေပါတယ်။ သူဖြေသလိုပါပဲ .... ဂငယ်ရှိသလို ဃကြီး ရှိပါတယ်။ နငယ်ရှိသလို ဏကြီး ရှိပါတယ်။ လ ရှိသလို ဠကြီး ရှိပါတယ်။ ကကြီးကတော့ ညီပျောက်နေတဲ့ အစ်ကိုလို မျက်နှာငယ်နေသလို ကျွန်တော် ခံစားရပါတယ်။
နံပါတ်(၃) ကတော့ ကိုကိုမောင် ဖြေထားတာနဲ့ ကျွန်တော် စဉ်းစားထားတာ နည်းနည်း လွဲသွားပါတယ်။
အဖြေကတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ ... မြ၀တီမင်းကြီး ဦးစဆီမှာ နာရီရှိနေလို့ပါပဲ။ နာရီရှိကြောင်း ပြောချင်တဲ့အတွက် လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းလေး ဖန်တီးပြီး မေးခွန်းထုတ်လိုက်ရတာပါ။ ကျွန်တော့်ဇာတ်လမ်းကိုက အဖြစ်မှန်မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုကိုမောင့်အဖြေကို မှားတယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး။ သူစဉ်းစားတာလဲ ကောင်းပါတယ်။
မြ၀တီမင်းကြီး ဦးစဆီမှာ နာရီရှိကြောင်း အထောက်အထား ပြစရာကတော့ ၁၈၃၆ ခုနှစ်ထဲမှာ ခရစ်ယာန်သာသနာရေး ကိစ္စကို စုံစမ်းဖို့ အင်းဝမှာ တစ်လကြာ နေထိုင်သွားတဲ့ အမေရိကန် နှစ်ခြင်း သာသနာပြုဆရာ မယ်လကွန် ( Malcom) ရေးသားခဲ့တဲ့ စာထဲမှာ မြ၀တီမင်းကြီး ဦးစအကြောင်း ခုလိုပါ ပါတယ်။
“သူသည် ရွှေပိန်းချအစ်တစ်ခုကို ယူ၍ သူရထားသော အင်္ဂလိပ်လုပ် ပစ္စည်းများကို ပြပါ၏။ ထိုအထဲတွင် မင်းကြီး မဟာဗန္ဓုလ မကျဆုံးမီက သူ့ထံပို့သော နာရီတစ်လုံး ပါလေသည်။”
အဖြေတွေကို ပြီးအောင် စိတ်ရှည်ရှည်ဖတ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:19 PM
Labels: Tag comments (8)
ငှက်ငယ်လေး Tag ထားလို့ ရေးစရာရှိနေတဲ့ ဉာဏ်စမ်းကို မေးလိုက်ပါဦးမယ်။ ပျော်စရာ မေးခွန်းလေးတွေပါ။ ခေါင်းကြီးသုံးပြီး အတင်း မစဉ်းစားကြပါနဲ့။ အိုင်ကျူတက်စ် မေးခွန်းကြီးတွေ မေးတတ်လောက်အောင် ကျွန်တော် မတော်ပါဘူး။ ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ မီးငယ် ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိလို ခပ်နောက်နောက် မေးခွန်းလေးတွေပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြို့ကြီးတွေထဲမှာ နာမည်နဲ့ အရမ်းလိုက်တဲ့ မြို့ကြီးနှစ်မြို့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်စဉ်းစားရသလောက်ပေါ့။ ဒီထက်လည်း ပိုချင်ပိုမှာပါ။ ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့ အဖြေနဲ့ မတူရင်လည်း မှန်နေတယ်ဆိုရင် မှန်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ကဲ ဘာမြို့တွေလဲ?
မြန်မာအက္ခရာ ဗျည်း ၃၃ လုံးထဲမှာ ပျောက်နေတယ်ထင်ရတဲ့ အက္ခရာတစ်လုံးရှိပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ပါကိုမပါတာပါ။ တီထွင်တဲ့ ပညာရှိတွေ မေ့ကျန်ရစ်တာလား၊ သေချာမထည့်ခဲ့တာလားတော့ မသိဘူးဗျ။ ဟီးဟီး ။ အဲဒီအက္ခရာမပါတော့ ရှိနေတဲ့ အက္ခရာလေးတစ်လုံးဟာ မျက်နှာငယ်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။ ကဲ ဘယ်အက္ခရာ ဖြစ်မလဲ?
အင်းဝနေပြည်တော်မှာ ဘကြီးတော်ဘုရားလက်ထက်က မြ၀တီမင်းကြီး ဦးစ ရှိပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ နာရီမောင်းတီးတဲ့သူဟာ အချိန်နဲနဲလွဲသွားပါတယ်။ အဲဒီခေတ်က အချိန်သိနည်းက ရေဖလားကြီးထဲမှာ ရေဖလားအသေးလေးတစ်လုံးကို အပေါက်ဖောက်ပြီး ထည့်ထားပါတယ်။ ဖလားအသေးလေးထဲကို ရေအပြည့်ဝင်ပြီး နစ်သွားရင် နာရီမောင်းတစ်ချက်တီးရပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်း တစ်နာရီလောက်ရှိမယ်လို့ ကျွန်တော့်ဟာ ကျွန်တော် သတ်မှတ်ပါတယ်။ မှတ်ကရော ... ဟီးဟီး။ အဲလို အချိန်နဲနဲ လွဲသွားတာကို မြ၀တီမင်းကြီး ဦးစ သိသွားလို့ အဲဒီမင်းချင်း အဆဲခံရပါတယ်တဲ့။ ကဲ ကျွန်တော်သိချင်တာ မြ၀တီမင်းကြီး ဦးစဟာ ဘယ်လိုများ အချိန်လွဲတာ သိသွားပါလိမ့်?
သမိုင်းစာအုပ်တွေ လှန်မရှာကြနဲ့ဦးနော်။ ဘယ်ထဲမှာမှ မပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဟာကျွန်တော် လျှောက်တွေးထားတာ။ တကယ့်အဖြစ်အပျက်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အဖြေပေးရင်တော့ သမိုင်းကို အခြေခံပြီး ပေးပါ့မယ်။ ယုတ္တိရှိရှိလေးပေါ့ ... ဟီးဟီး။
ကဲ ငှက်ငယ်လေးရေ ... ကျေနပ်တယ်နော်။ လာတဲ့သူ အပေါင်း ကျွန်တော်ရူးကြောင်ကြောင် စဉ်းစားထားသမျှကို ကူပြီး အုန်းစားပေးကြပါဦး။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:40 PM
Labels: Tag comments (11)
“မီးဗျို့ ! မီး ... မီး ...!!!”
၀ုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ခြေဦးတည့်ရာ ပြေးလွှားနေတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အသံနဲ့အတူ တောမီးမလောင်တာကြာလို့ ပျင်းရိနေတဲ့ တောကြောင်တစ်ကောင် လန့်နိုးလာတယ်။
အားရ၀မ်းသာပဲ လက်ခမောင်းခတ်ဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။
‘ ၀ုန်း ! ... ’
တောမီးက သူ့ကိုပါ ၀ါးမျိုသွားတယ်။
မီးလောင်နေတာက သူနဲ့ နီးနီးလေး ...။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမှ မစူးစမ်း မလေ့လာသေးပဲ တောမီးလောင်တိုင်း လက်ခမောင်းခတ်ချင်နေတဲ့ တောကြောင် ... မီးလောင်ခံရတာတောင် နည်းသေး။ ။
ဒီဝတ္တုတိုလေးနဲ့ အတူ ဘလော့စလုပ်လုပ်ချင်း တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ၀တ္တုတိုလေးတစ်ပုဒ်ပါ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသစ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အဟောင်းတလည်လည်ပေါ့ဗျာ။
မြို့သူမြို့သားများကလည်း အထင်တကြီးနှင့် ယုံကြည်ကိုး ကွယ်မိကြလေသည်။
မာရ်နတ်က မီးပုံကြီးတစ်ခု ဖန်ဆင်းလိုက်၏။
" ဟုန်း !!!"
လင်းတော့လင်းပါသည်။ သို့သော် မာရ်နတ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အနည်းငယ်သာအလင်းရောင်ရကြ၍ ကျန်သောမြို့သူမြို့သားများမှာ အလင်းစအနည်းအကျဉ်းနှင့် မှုန်ပျပျမျှသာ။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:44 PM
Labels: ဝတ္တုတို comments (12)
သုညတွေ မွန်းကျပ်နေကြတယ် ...။
မျက်လုံးပေါင်းများစွာ ၀မ်းသာ ၀မ်းနည်း
ကြေကွဲ ဆွေးမြေ့ ပျော်ရွှင် ကြည်နူး
ငါ့အိပ်မက်တွေ ရေဖြစ်တဲ့နေ့ ...
ငါ့ကျိန်စာတွေ သီချင်းလုပ်ဆိုတဲ့နေ့ ...။
အမှိုက်အိတ်ကြီးလို ခံစားရတယ် ...
အသုံးမကျတဲ့ အရာတွေ အထည့်ခံရပြီး
နောက်ဆုံးကျ ကိုယ်တိုင် အမှိုက်ဖြစ်ရတာပဲလေ။
ငါက ဖိနပ်တစ်ဖက်လား? ဖျာတစ်ချပ်လား?
အဲဒီနေ့က ငါ့စိတ်တွေ မရေမရာနဲ့
ရေရေရာရာပဲ အောက်ဆုံးကို လွှင့်မျှောပြုတ်ကျ ...။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးလို့ မရလောက်အောင်
ဘုရားသခင်က ကြွေအံ မကစားပေမယ့်
အဲဒီနေ့က နတ်ဆိုးတွေ နိုင်သွားကြတာ သေချာပါတယ်။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:05 PM
Labels: ကဗျာ comments (15)
သတိပေးချက် ။ ။ ဤအရာသည် ၀တ္တုတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်တို့၏ သိပ္ပံနည်းကျ အတွေးအခေါ်များအား အပြင်ဘက်၌ ခတ္တခဏ ချွတ်ထားခဲ့ကြပါကုန်။
ဆေးစက်ရောင်စုံ စွန်းထင်းနေတဲ့ ခပ်ညစ်ညစ် ပန်းချီကားလေးတစ်ချပ်နဲ့ အဖြူရောင်သက်သက် ရှင်းသန့် စင်ကြယ်တဲ့ ပန်းချီကားလေးတစ်ချပ်တို့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သွားကြတယ်။
“ငါနဲ့ ဝေးဝေးနေပါလားကွာ ... ခပ်ညစ်ညစ်ဆေးစက်တွေ နင်ရဲ့ အဖြူရောင်ထဲကို စွန်းပေသွားမှာ မကြောက်ဘူးလား ....”
“ဖြစ်နိုင်ရင် .... နင့်ရဲ့ ဆေးစက်တွေကိုတောင် ငါ ဝေမျှ ယူချင်ပါတယ် ....”
ထိုကောင်လေးနှင့် ကောင်မလေးသည် သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြ၏။
ကောင်လေး ။ ။ “ဟိတ် ... နင်သိလား”
ကောင်မလေး ။ ။ “ဘာလဲ?”
ကောင်လေး ။ ။ “ပင်လယ်ကြီးနဲ့ ကောင်းကင်က သိပ်ချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေတဲ့ဟ”
ကောင်မလေး ။ ။ “ဟုတ်လား! ဘယ်တုန်းက သူငယ်ချင်း ဖြစ်သွားတာလဲ?”
ကောင်လေး ။ ။ “ကြာပြီဟ ... ကမ္ဘာဦးအစကတည်းကပဲ”
ကောင်မလေး ။ ။ “နင်က ဘယ်လို သိတာလဲ?”
ကောင်လေး ။ ။ “သူတို့က အင်္ကျီ ဆင်တူလည်းဝတ်တယ် ... ပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံကြဘူးလေ ...”
ကောင်လေး ။ ။ “နေ့အလင်းနဲ့ ညအမှောင်ကလည်း သိပ်ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပဲတဲ့”
ကောင်မလေး ။ ။ “ ဟုတ်လို့လားဟာ ... နင်ကလည်း ... အလင်းနဲ့ အမှောင်က ဘယ်တုန်းကများ မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ ရလို့လဲ ...”
ကောင်လေး ။ ။ “ငါပြောတာက အလင်းနဲ့ အမှောင်မဟုတ်ဘူး ... နေ့ရဲ့ အလင်းနဲ့ ညရဲ့ အမှောင်ကို ပြောတာ ...”
ကောင်မလေး ။ ။ “ ထားပါတော့ ... ဘယ်တုန်းက ဖြစ်သွားတာလဲ?”
ကောင်လေး ။ ။ “အဲဒါလည်း ကမ္ဘာဦးအစကတည်းကပဲတဲ့ဟ”
ကောင်မလေး ။ ။ “လုပ်ပြန်ပြီ ... နင်က ဘယ်လို သိတာလဲ?”
ကောင်လေး ။ ။ “နင်ကြည့်ပါလား ... ညတစ်ခုကုန်လို့ နေ့တစ်နေ့ကို ရောက်တော့မယ်ဆိုရင် အလင်းရောင်က ၀ုန်းကနဲ ရောက်မလာဘူးလေ ... တဖြည်းဖြည်း မှောင်ရာကနေ လင်းလာတယ် ... အဲဒီလိုပဲ ညအမှောင်ကလည်း ညရောက်တော့မယ်ဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းပဲ လင်းရာက မှောင်သွားတယ် မဟုတ်လား ...”
ကောင်မလေး ။ ။ “ ဟုတ်သားပဲ ... အဲဒါနဲ့ သူတို့က သူငယ်ချင်း ဖြစ်ရောလား ...”
ကောင်လေး ။ ။ “ ဒီလိုဟ ... သူတို့က သူငယ်ချင်းတွေဆိုပေမယ့် အတူယှဉ်တွဲပြီး နေလို့မရဘူးလေ ... တစ်ယောက်ရောက်လာရင် တစ်ယောက်က ထွက်သွားရမှာ မဟုတ်လား ... အဲဒါနဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ငဲ့ညှာပြီး နေ့အလင်း လာရင်လည်း ဖြည်းဖြည်းလေးလာတယ် ... အဲဒါမှ ညအမှောင်ကလည်း ဖြည်ဖြည်းလေး ထွက်သွားရမယ်လေ ... ညရောက်တော့မယ် ဆိုရင်လည်း ဒီလိုပဲလေ ... သူတို့ နှစ်ယောက်က အရမ်းခင်ကြတော့ အဲဒီလို မျက်နှာချင်း ဆိုင်လို့ရတုန်းလေးခဏမှာ စကားတွေ အများကြီး ပြောကြတယ်တဲ့ ...”
ကောင်လေး ။ ။ “ဟိတ် ...”
ကောင်လေး ။ ။ “ဒီနေ့ နင့်မွေးနေ့မဟုတ်လား”
ကောင်မလေး ။ ။ “ဟုတ်တယ်လေ ...”
ကောင်လေး ။ ။ “ရော့ ... နင့်အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်”
ကောင်မလေး ။ ။ “ ပေး .....”
ထိုကောင်မလေးသည် ကောင်လေးပေးသော မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို ယူ၍ ဖွင့်ကြည့်လိုက်လေသည် .....။
ကောင်မလေး မွေးနေ့အတွက် သူ့သူငယ်ချင်း ကောင်လေး ပေးသော မွေးနေ့လက်ဆောင်မှာ ..... ..... ..... ..... .....
ဤတွင် ၀တ္တုပြီး၏။ သင်တို့၏ သိပ္ပံနည်းကျ အတွေးအခေါ်များအား မမှားအောင် သေချာဂရုတစိုက်စီး၍ ပြန်ကြပါကုန်။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 5:54 PM
Labels: ဝတ္တုတို comments (29)
..... ..... လမ်းဖောက်သူဖြစ်တယ် .....။
..... ..... ဦးဆောင်သူဖြစ်တယ် .....။
ရှေ့ဆုံးက သွားနှင့်သူ .....
ကြယ်မြင် လမြင် လောကဓံကို
လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ရာဇ၀င် .....။
နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ပွင့်ခွင့် မရပေမယ့်
ထာဝရ မွှေးပျံ့နေမယ့် ရနံ့တွေကို
ကမ္ဘာမြေအတွက် ချန်သွားခဲ့သူ .....။
သူဟာ အနုပညာသမား မဟုတ်
သူကိုယ်တိုင်က အနုပညာ ဖြစ်တယ် ....။
တာရာမင်းဝေ = အနုပညာ
အနုပညာ = ထာဝရ ရှင်သန်ခြင်း
တာရာမင်းဝေ = ထာဝရ ရှင်သန်ခြင်း ။ ။
(ဆရာတာရာမင်းဝေ ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ်နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ)
ဒီကဗျာလေးနဲ့အတူ ဟိုးတုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ အလွမ်းပြေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကဗျာလေးကတော့ ကိုအောင်ဒင် စီစဉ်တဲ့ တာရာမင်းဝေ အမှတ်တရ စာစုများ စာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ကဗျာလေးပါ။
လူနံပါတ် ၁၃ အဖြစ်နဲ့
ရက်စက်မှုတွေ ... ရိုင်းပျမှုတွေ ...
(ဆရာ တာရာမင်းဝေ သို့ အမှတ်တရ)
Labels: ကဗျာ comments (14)